झापाको उपाधि रक्षा यात्रामा एपिएफ बाधक बन्ला ? | Hamro Khelkud
झापाको उपाधि रक्षा यात्रामा एपिएफ बाधक बन्ला ?
इलाम– इलाममा जारी टुबोर्ग माईभ्याली गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको साविक विजेता र उपविजेताबीच यसपटक एक चरणअघि नै भेट हुँदैछ । साविक विजेता रमपम झापा ११ र नेपाल एपिएफ क्लब आज दोस्रो सेमिफाइनलमा एकअर्काको सामना गर्दैछन् ।
आजको विजेताले फाइनलमा अर्को विभागिय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबको सामना गर्नेछ । गत बर्षको फाइनलमा झापाले एपिएफ २–० ले हराएको थियो । यो सिजन दुवै टोलीले एक एक उपाधि जिते छन् । झापाले मेची नेत्रालय काँकरभिट्टा गोल्ड कपको उपाधि जितेको थियो । त्यहाँ फाइनलमा झापाले एपिएफलाई २–० ले हराएको छ । अर्कोतर्फ एपिएफले पनि यो सिजन पुसमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद स्वर्ण पदक जितेको थियो । तर, त्यसयता टोलीको प्रदर्शन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।
आज हुने सेमिफाइनलमा दुवै टोलीले सफलताको आशा राखेका छन् । इलामका झापाले समर्थन पाउने बुझेका एपिएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले त्यसका वावजुद पनि आफ्नो टोलीले सफलता प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त छन् । उनले भने,‘आजबाट एपिएफको हारको श्रृङ्खला रोकिनेमा म ढुक्क छु ।’ अर्कोतर्फ एपिएफ विरुद्ध सहज नतिजा निकाल्नेमा झापा ११ का सहायक प्रशिक्षक सन्तोष गुरुङले विश्वस्छन् । उनले भने,‘यसअघिका भेटमा जस्तै आज पनि हामी जित्नेमा विश्वस्त छौं ।’